Enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuphumula enkabeni yeRussia, hhayi kude neMoscow, iyinkimbinkimbi yehhotela "Dream" (Eagle). Indlu yokugibela, isithombe esivame ukubekwa yizivakashi kumanethiwekhi omphakathi, inezinkanyezi ezintathu kuphela ngokwezigaba. Kodwa izinga lenkonzo kanye nekhwalithi yezinsizakalo, induduzo yokuphila kanye nendawo emangalisayo phakathi kwemvelo enhle yaseRashiya yenze le hotele idumela elihle kakhulu. Kuyaziwa ukuthi izinkanyezi eziningi ze-pop, ifilimu nethelevishini, kanye nezinye izigameko zazihlala kule ndlu yokugibela futhi zikhulume kahle ngezingqalasizinda zayo nezinsiza. Ake sijwayelane nezwe eliyinkimbinkimbi futhi sithole ukuthi singabanikeza izivakashi nabavakashi bamaholide.
Uphi nokuthi ungafika kanjani
Le complex complex park ikhona amakhilomitha ayisikhombisa ukusuka edolobheni elifanayo kanye amakhilomitha angu-300 avela eMoscow. Ngakho-ke, uma umisa lapha futhi ufuna ukuya esikhungweni, ngeke kube nezinkinga. Umzana lapho ihhotela likhona kuthiwa i-Green Shum (Orel). Indlu yebhodi "Dream" yakhiwa ogwini lwechibi elihle kakhulu, futhi lizungezwe ihlathi elinyene. Akusizo ngalutho ukuthi lezi zindawo zidumile ngokuba yizindawo ezihamba phambili ezingeni lezimpelasonto zomndeni wonke, kanye nokuhlelwa kwemicimbi yenkampani. Ukufika ku-Eagle, okungenani kusuka enhloko-dolobha, akulona nzima. Leli hubo elikhulu lokuthutha, izitimela ezinjengejubane elifana ne-"Swallow" (ku-Kursk), kanye nabasebenzi be-"Turgenev", hamba lapha. Indlu yebhodi "Dream" (Eagle) esiteshini sesitimela cishe ngo-11 km. Isikhumulo sezindiza esiseduze seBryansk, ukusuka lapho ukuze uthole amahora amabili nesigamu. Akukude neyinkimbinkimbi yehhotela yi-Holy Dormition Monastery.
Indlu yokugibela "Dream" (Eagle) iqukethe izakhiwo ezimbili. Kunamakamelo angu-38 ezigaba ezahlukene kuzo. Okokuqala, lezi yizindinganiso zomuntu oyedwa noma ezimbili izivakashi ezinezindawo eziyi-15 square metres. Bahlomele konke okudingekayo, kufaka phakathi ama-TV, amafriji, ama-shower cabins. Izesekeli zokungcebeleka zifakwa endlini yokugezela nsuku zonke. Emakamelweni aphezulu (amamitha ayisishiyagalolunye) kukhona amatafula ekhofi, izihlalo zokuzilibazisa, kanye nezinsimbi ezomileyo. Okukhulu kunawo wonke futhi okunethezeka kakhulu kokuphila yi-suites. Indawo yabo ingamamitha angu-35, kunezindawo zokulala nokuhlala, imibhede yomndeni ekhululekile. Lawa makamelo ane-air conditioned, futhi abamba i-Wi-Fi, kukhona ephephile, futhi izivakashi zithola izingubo zokugqoka. Zonke amakamelo okuvakasha amasha, avulekile, akhanyayo. Imipula yilezi zanamuhla, ikhwalithi eliphezulu. Kukhona amakamelo ezithameli ezingabhemi. Ungaletha nezilwane ezifuywayo zakho.
Indlu yebhodi "Dream" (Eagle) ihlanganisa ibhulakufesi ngemali yokuphila. Ihlanganiswa ekuseni ekuseni ehhotela lokudlela. Inamakamelo amaningana, angakwazi ukuhlala njengezinkampani ezincane kubantu abangamashumi amabili, kanye nenani elikhulu labantu - kuze kube ngu-80. Ngaphezu kwalokho, le ndawo yokudlela ikhonza amadili futhi ihlele imishado. Kukhona futhi i-cafe ehlobo emgodini. Endaweni yokudlela ungadla isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Yena ngokukhethekile eRussia naseYurophu zokudla. Kusihlwa, kudlalwa umculo omculo, ungahlabelela nge-karaoke. Kuzingane kukhona imenyu ekhethekile nezihlalo eziphakeme. Ukudla kuhle, ama-waiters aqeqeshwe kahle, isidlo sasekuseni sinikezwa ukudla kwasekuseni ngezitsha ezihlukahlukene. Zonke zihle, ziphekwe ezingeni eliphakeme kakhulu. Izivakashi eziningi zibonisa inhlonipho ekhethekile kumpheki. Ehlobo, amatafula ahlelwe yichibi.
Izivakashi zingakwazi ukupaka izimoto zabo endaweni yokupaka yehhotela, zibeke izingubo zabo zokugeza. Indlu yebhodi "Iphupho" (Eagle) idume ngokuthi abantu bomuzi bathanda ukudlala imishado lapha. Lokhu akumangazi, ngoba echibini ensimini kukhona i-rotunda ehlotshiswe ngokukhethekile, lapho ungakwazi khona ukwenza isithombe esihle kakhulu sokudubula isithombe, kodwa futhi ubhalise umshado "emgwaqeni." Endlini yokugibela ngokuvamile uqhuba ama-seminar ahlukahlukene kanye nokuqeqesha. Kule njongo, kunamakamelo amabili okomhlangano okhethekile nawo wonke umshini odingekayo wokulalelwayo. Ngezinsizakalo ezihlukahlukene ungasebenzisa isikhungo sebhizinisi.
Ngezimpelasonto, ihhotela line-disco. Indawo yokudlala ephephile yakhiwa izingane, ipaki yezintambo yayisasebenza. Izivakashi zehhotela zingasebenzisa i-gym, ukuqasha amabhayisikili, izimoto kagesi. Futhi ukuze kutholakale izivakashi kukhona i-sauna enhle evela endlini yokungena nge-sauna ngqo ogwini lolwandle. Ebusika, ungaya ngqo emgodini, futhi uphephile ngokuphelele. Esitezi sesibili kwendlu yelogi kukhona igumbi lokuzijabulisa netafula lokudoba, ama-darts, i-bocce. Yini enye indlu yokubheka ezithakazelisayo "Dream" (Eagle)? Ukubuyekeza kuqinisekisa ukuthi ehlobo ogwini lolwandle ogwini olunehhotela elinesiqalo sokufakelwa. Umnyango ukhokhelwa, kodwa intengo yayo ihlanganisa ukusetshenziswa kwemibhede yelanga kanye namadopho. Ngaphezu kwalokho, ihhotela linomthamo welanga. Futhi ngezinsuku ezinhle awukwazi ukushisa ilanga kuphela nokugebha, kodwa futhi uhlanganyele emidlalweni yemidlalo ehlukahlukene.
Iholide leholide "Iphupho" (Eagle): izibuyekezo
Abavakashi balishiya impendulo emihle futhi ejabulisayo ngokuphumula kulezi zindawo. Bavame ukuloba ngeqiniso lokuthi lifudumele, likhululekile futhi lifuna ukuhlala isikhathi eside. Izithembiso eziningi zokubuyela ehhotela "Dream" (Eagle). Indlu yokugibela, lapho amanani aphansi kakhulu ngaphansi kwezinga elifanayo lenkonzo njengendawo yesifunda saseMoscow, ngokungangabazeki kuyothathwa. Izindleko zezinga elilodwa kuleli hotele liqala kusukela ku-1800 ruble ubusuku bonke. I-Junior suite yama-two izobiza ama-ruble angu-3000. Kanye nebhulakufesi. Abasebenzi banobungane kakhulu. Insimu enkulu, ilindiwe, i-ennobled futhi ihlelekile, itholakala endaweni ehlanzekile ngokwemvelo. Ngakolunye uhlangothi kwehhotela kukhona ichibi, ngakolunye uhlangothi - umfula kanye ne-oak grove. Lapha, ukubukwa okuhle nokuphumula kwangempela kuqinisekisiwe.
Indlela ukusetha isikhathi ukuthungela
I-Vung Tau, iVietnam: ezikhangayo, izivakashi, ukubuyekezwa